कता हराए काठमाडौंका ब्रुमर ?
भाद्र २६, काठमाडौं । गत असार दोस्रो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए- काठमाडौंमा धुलो कम भइसक्यो, मास्क लगाउन पर्दैन। तुलनात्मक रूपमा त्यतिबेला धुलो कम भएको थियो तर मास्क नलगाई निर्धक्क हिँड्न सक्ने गरी धुलो हटेको थिएन।
प्रधानमन्त्रीले धुलो हटिसक्यो भने पनि मानिसहरूले मास्क लगाइरहेका थिए। त्यसको केहीदिनपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि भने- केही केही मानिस सरकारको विरोध गर्न पनि मास्क लगाएर हिँडिरहेका छन्। सेतोपाटीले समाचार लेखेको छ,
दशैंसम्म भित्री सडक पनि कालोपत्रे भइसक्ने भएकाले काठमाडौं पूर्ण रूपमा धुलोमुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो। दशैं आउन दुई साता बाँकी छ। तर प्रधानमन्त्रीले दुई महिनाअघि बाचा गरेजस्तै काठमाडौंको धुलो घटेको छैन बरू दिनदिनै बढिरहेको छ।
पानी परेसँगै हुने हिलो र घाम लाग्दा उड्ने धुलोले नागरिकलाई हैरानी भएको छ।
केही समयअघिसम्म काठमाडौं सडकको धुलो बढार्ने ब्रुमर पनि अहिले देखिन छाडेका छन्। महानगरले गत चैत दोस्रो साता पाँच थान ब्रुमर किनेको थियो। असार १ गते चीनको छेन्दु नगरले दुई थान ब्रुमर हस्तान्तरण गरेपछि महानगरमा सात थान ब्रुमर छन्।
बर्खा लागेपछि ब्रुमरले सडक सफा गरेका छैनन्। सडकमा धुलो नदेखिनु पर्नेमा किन ब्रुमर नै देखिन छाडे? यो प्रश्नमा महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने, ‘बर्खा भएर हो। वर्षा थामिएको छैन। ब्रुमरले धुलो बढार्छ, हिलो बढार्दैन। सडक हिलो छ त्यही भएर ब्रुमर कम चलाएका छौं।’
भदौ अन्तिम सातासम्म पनि वर्षा थामिएको छैन। महानगरभित्रका सडकमा खाल्डाखुल्डी थुप्रै छन्। बर्खामा पानी जमेपछि खाल्डा बढेका छन्। खाल्डाखुल्डी भएका सडकको धुलो ब्रुमरले बढार्न सक्दैन। ‘मिलेको, चिल्लो सडक छ भने धुलो उठाउन सजिलो हुन्छ,’ उनले थप प्रष्टाए।
इटालीबाट खरिद गरी ल्याइएका यी ब्रुमरमा चार वटा ब्रस हुन्छन्। ती ब्रसले नै सडकका धुलो सफा गर्छन्। महानगरले रातिको समय आठ घण्टासम्म सडकमा ब्रुमर चलाएर धुलो उठाउने गरेको थियो। सुरूका दिनमा केही दिन सडक सफा देखिए पनि बर्खा लागेपछि सडकमा धुलो र हिलो छ।
ब्रुमरले एक पटकमा सडकबाट सात घनमिटर धुलो संकलन गर्न सक्छ। धुलो र पातपतिङगर संकलन गर्नका लागि ब्रुमर प्रयोग गरिएको हो। ब्रुमरले नौ घनमिटर पानी बोक्न पनि सक्छ। सडक सफा गर्दा पहिले पानी छर्केर धुलो नउड्ने बनाएपछि मात्रै यसले धुलो र पतिङगर तान्छ। ब्रुमरले प्रतिघण्टा तीन किलोमिटरदेखि सडकको अवस्था हेरेर २० किमीसम्म सफा गर्न सक्छ।
उनले अब वर्षा थामिएपछि ब्रुमरबाट धुलो उठाउने कामलाई तीब्रता दिइने बताए । ‘ब्रुमर बिग्रेका छैनन् सद्दे छ’, वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘वर्षा रोकिएपछि बढार्न थाल्छौं। वर्षा नभएको बेला ब्रुमरले सडक बढार्दै आएका छौं।’